Product Reviews - iSure Myanmar
RingKeDX is the best.
Ringke DX Case for iPhone 13 Pro/ 13 Pro Max
Delivered as advertised. Thank you
Incase A.R.C Daypack For Macbook 12″-16″/ 2013-2021 (Black)
SwitchEasy Magnetic Removable Screen Protector For iPad Pro 11″/ Air4(2018-2021)
Solid good quality keyboard protector
Coteetci Keyboard Protector For M1 Macbook Pro 13″/16″ (2019-2020)
Nice slim macbook pro m1 cover which i like very much.
Coteetci Glossy Hardshell Transparent Case For M1 Macbook Air 13″/ Pro 13″ 2021
Cover is for 13 Pro Max, everything fit for 12 Pro Max, except that there is some gap near the camera.
Coach Slim Wrap Case for iPhone 12 Series & iPhone 13 Series (Signature C Black)
Rubber silicone tip လေးတွေပါရောင်းရင်သိပ်ကောင်းပါမည်
AirPods3with MagSafe Charging Case
It’s good to use and not slipped
Coteetci Aluminum Bumper Case For iPhone 12 Mini
J5 USB-C Dual HDMI Mini Dock
Zero power when I buy
Thx for 50% discount
Uniq Heldro Clear Case For iPhone 12 Pro Max
iPad9လေးက ဈေးလည်းသက်သာတယ် Youtube , Facebook သုံးတယ် ,စာရင်လေး တွေလုပ်တယ် Zoom Meeting , online Glass လေးတွေ တက်တယ် တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေတယ် Budget iPad လေးပါ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်
Presentation လုပ်တဲ့အချိန်တိုင် iPad Pro လေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လုပ်တယ် ၊တခြား adapter တွေလို တန်းလန်းရီး ဖြစ်မနေဘူး ၊ ကပ်ထားလို့ ရတာလေးက အသက်ပဲ
J5 USB-C to 4K 60 Hz HDMI Travel Dock for iPad Pro
HDMI cable နဲ့ ဒါလေးနဲ့ တွဲသုံးတာ resolution မကျတာလေးကို ကြိုက်မိတယ် ။
J5 USB-C to 4K HDMI Adapter
လက်ရှိသုံးနေပြီး အဆင်ပြေနေတဲ့ Productလေးပါ Type နှစ်မျိုးနဲ့ သုံးလို့ ရလို့ ကျနော်တို့လို MacBook User တွေအတွက် သုံးသင့်တဲ့ Product လေးပါ။ Heavy Port တွေမပါလည်း Okay တယ်ဆို ဒါလေးကတော့ သုံးကြည့်သင့်တဲ့ ဟာလေးပါ။
J5 USB-C to 4K HDMI Cable With PD100W Pass-Through
Ethernet Port ပါလို့ Wi-Fi တွေ အလုပ်မလုပ်တဲ့ ခုလိုအချိန်မှာ တော်တော်လေး အဆင်ပြေစေတယ်ဗျာ။
J5 USB-C Multi-Adapter
Report များများ ကြည့်ရတဲ့ ကျနော့်အတွက် External Display တွေနဲ့ တွဲသုံးရတာ တော်တော်လေး အဆင်ပြေတယ်။
အသံထွက်လည်းကောင်း ၊ portable လည်းဖြစ်တော့ ဘယ်သွားသွား အေးဆေး သယ်သွားလိုရတာလေး ကို ကြိုက်မိ🥰
Anker SoundCore Mini Flare Bluetooth Speaker
Trans Music တွေ နားထောင်တဲ့ အချိန် ဆို တကယ် feel လို့ကောင်းတဲ့ Headphone 🎧
Stay Cation သွားတဲ့ အချိန်တိုင်း ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးလေး သယ်သွားလို့ရတာလေးရယ် ၊ ရေစိုခံတာလေးရယ် ၊ အသံထွက်လေးရယ် Very Perfect ပဲ
JBL Clip 4: Portable Waterproof Bluetooth Speaker
လုံလောက်တဲ့ အသံ အရေသွေးနဲ့ Portable ဖြစ်တာလေးတော့ တော်တော် သဘောကျမိ
JBL GO 3: Portable Waterproof Bluetooth Speaker
Bass သံက ရင်တွေတောင် ခုန်တယ် 😁
JBL Flip 5: Portable Waterproof Bluetooth Speaker
သူ့ Sound quality ကို တကယ် ခိုက်တယ်
ဒီ adapter လေးက ipad ,MacBook တွေပါ အသုံးပြုလို့ရတော့ Adapter နောက်တစ်ခု ထပ်ဝယ်စရာမလို့တော့ဘူး Power ဝင်တာလည်း မြန်တယ် Fast Charging လည်းဖြစ်တော့ iPhone လည်း အသုံးပြုလို့တောင်အဆင်ပြေသေးတယ် ဝယ်ရတာတန်းတယ် Qualtity ကောင်းတယ်
Macbook အတွက်တော့ အဓိက ဝယ်လိုက်တာပါ iPhone အတွက်စမ်းသုံးကြည့်လိုက်တော့ လည်း အဆင်ပြေတယ် USB-C လည်းပါတယ် device ၂ ခုကို တစ်ခါတည်းသုံးတာတောင် သိပ်မပူဘူး Good Accessories
Belkin BOOST CHARGE 63W Dual USB-C PD GaN Wall Charger
Defense Case လေး ရှာနေရင်းနဲ့ website ပေါင်းစုံခဲ့ ပြီ
iSure Website ကနေ တွေလို့ မှာကြည့်ရင်းနဲ့ သုံးနေတာ အရမ်းကြိုက်မိတဲ့ တစ်ခု Defense ဖြစ်တာ ပိုကြိုက်မိတယ် ဗျာ။
3 in 1 Magsafe stand ကို အသုံးပြုလိုက်တော့မှပဲ Power သွင်းဖို့ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေသွားတာ တစ်ခုတည်းထဲနဲ့ကို အဆင်ပြေနေရောပဲ Docking Error ဖြစ်မှာလည်း မပူရတော့ပါဘူး အချိန်ကုန်လည်းသက်သာတယ် အသုံးပြုရတာအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်
Mini6အတွက် Paperlike က ရှားတယ် iSure website မှာ တွေ့လို့ မှာပြီး သုံးကြည့်တာ တော်တော် ကောင်တာ တွေ့ရတယ် ။ ပို့ပေးတာလည်း မြန်တယ်။ 👍👍👍
SwitchEasy PaperLike Screen Protector For iPad Mini 6
SwitchEasy pencil လေး လက်ရှိသုံးနေတာ ပါ Pencil Tip လေးတွေ ကရေပါများပြီး အက်လာလို့ အပို ရှာရခက်နေတာ iSure website ကနေ လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ရလို ပျော် 😊
SwitchEasy Pencil Tips –2Packs
ပြုတ်ကျပြီးထိခိုက်မပူရတဲ့အပြင် ဒီဇိုင်းပိုင်းကလည်း Premium ဆန်တယ်
SwitchEasy StarField 3D Glitter Star Resin Case (iPhone 13/13 Pro/ 13 Pro Max)
Silicone သားကောင်းတဲ့တွက် AirPods ကို အရောင်တွေစွန်းတာမျိုးမရှိဘူး
SwitchEasy Skin Soft Touch Silicone Protection Case For AirPods 3
SwitchEasy Play Liquid Silicone Case with Landyard (iPhone 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max)
Thirty Party Accessories ဖြစ်တဲ့တွက် စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့အပြင် အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့တွက်ကြောင့်ကြိုက်
သုံးခဲ့ဖူးသမျှ စာရွက် သားလို ရေးလို့ ခြစ်လို့အကောင်းဆုံး
SwitchEasy PaperLike Screen Protector For iPad Pro 11″ (2018~2021)
ဒီနေမှာ ဒီနေရတာမို့ တော်ဆင်ပြေတယ်
SwitchEasy AERO+ Ultra-Light Shockproof Case (iPhone 13/13 Pro/ 13 Pro Max)
ဒါလေးက style ကျပြီး Girly ဆန်တော့ အထာကျကျမိုက်တယ်
ပေးတာ မည်းတာလေးတွေလည်းပြန်လျော်လို့ရတာ ပိုသဘောကျ
SwitchEasy PLAY Liquid Silicone Case with Landyard For iPhone 12 Series
သုံးရတာ original အတိုင်းပဲ
Screen Protector လေးထဲမှာဆိုရင်တော့ SwitchEasy ပဲသုံးဖြစ်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ Quality ပိုင်းကိုတော်တော် သဘောကျလို့ပါ။ online class လေးလည်းတတ်နေရတော့စာရေးတဲ့ အခါ တကယ် စာရွက်ပေါ်မှာဆွဲနေရတဲ့features လေးကိုပေးပါတယ်။ ပေးရတဲ့ ဈေးနှုန်းကလည်းတန်တယ်ပြီးတော့ တကယ်ကောင်းတဲ့ Quality လည်းရတော့ ကျေနပ်ပါတယ်။ iSure ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Thet Htut Oo
အိမ်ကခွေးလေတွေက အရမ်းဆိုးတော့ Leather Case လေးနဲ့ မှအဆင်ပြေသွား
SwitchEasy AirTag Warp Leather Case (Keyring)
ဒီ Screen ကပ် လေးက ဖြုတ်လို့တပ်လို့ရတယ် ကိုယ်တိုင်လည်းကပ်လို့ရတယ် ပုံဆွဲတဲ့အခါ တစ်ခြား Paperlike တွေနဲ့မတူပဲ Smooth အရမ်းဖြစ်တယ် Drawing အတွက်တော့ အရမ်းကောင်းတယ် ကြိုက်ပါတယ်
Magsafe charger နဲ့ တွဲသုံးလို့ရတဲ့ case လေးမို့ မီးပျက်တဲ့အချိန်တွေမှာ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ် အရမ်းမိုက်ပါတယ်
SwitchEasy MagCrush MagSafe Shockproof Clear Case (iPhone 13 Series)
camera ကို အပြည့်ကာကွယ်ပေးတာမို့ လွှတ်ချလည်း camera ကို မထိနိုင်လို့ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်
SwitchEasy LenShield Aluminum Camera Lens Protector For iPhone 13 series (Black)
Design ပိုင်း အရမ်းကြိုက်
SwitchEasy Origami Protective Case For iPad 7/8/9/10.2″ 2021
Nyi Linn Nyo
Case ကသုးံရတာ အဆင်ပြေတယ်ဗျ တော်ရုံထိခိုက်မူတွေစိတ်မပူရတော့ဘူး
Switcheasy Artist Artisan Protective Case for AirPods 3
ပုံစံ ၄မျိုးအသုံးပြုလို့ရတာမို့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် Leather သားမို့ ကိုင်ရတာ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်
SwitchEasy Origami Protective Case For iPad Air42020-2021
Pencil အတွက် wireless charging ပါလို့အရမ်းကြိုက်ပါတယ်
SwitchEasy Origami Protective Case For iPad Pro 12.9″ 2021
ဒေါင့်ပါတဲ့အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတယ် ရုပ်ရှင်ဘဲကြည့်ကြည့် design ဘဲဆွဲဆွဲ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်
SwitchEasy Origami Protective Case For iPad Pro 11″/ Air42020-2021
keyboard တွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရလို့ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ် Design ပိုင်းလေးလည်း မိုက်
SwitchEasy CoverBuddy Protective Case For iPad Pro
အကြမ်းခံတယ် သုံးရတာ smooth ဖြစ်တယ် အရမ်းကြိုက်
SwitchEasy Glass Pro Screen Protector (iPhone 13 Series)
အရမ်းကောင်းတဲ့ မှန်ကပ်ပါ ဂိမ်းဆော့ရတာ အဆင်ပြေ
SwitchEasy Glass Hero Mobile Gaming 9H Glass Screen Protector (iPhone 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max)
ဒီ cover တပ်ထားတာ ကိုင်ရတာလဲ လက်ထဲ ကျစ်လစ်ပီး camera လဲလုံတော့ ကြိုက်နေပီ
SwitchEasy Daisy Artist Double In-Mold Decoration Case (iPhone 13)
ဖုန်းနဲ့လဲ fit ဖြစ်ပီး Design က ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ smart ကျတယ်
Pencil2လေးနီးပါးသုံးလို့ကောင်းတယ် ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်သလိုခံစားရတယ်
pencil Pro လေးသုးံရတာလဲ ကောင်းတယ် အားလဲ အရမ်းခံတယ်
ဝယ်သွားပီးနောက်နေ့ ဒီ Cover ‌တပ်ထားပီး ဖုန်းလွတ်ကျတာ အနောက်ဘက်နဲ့ကျတာ Camera မှန်ကွဲပီထင်တာ ဒီcover ရဲ့ camera နေရာကခပ်မြင့်မြင့်လေးဆိုတော့ camera မှန်နေရာလုံးဝမထိသွားလို့ တော်တော်လေးသဘောကျမိတယ်
SwitchEasy Sakura Artist Double In-Mold Decoration Case (iPhone 13/13 Pro)
Design လေးက ရိုးရိုးလေးနဲ့ဆန်းတယ် အပြင်မှာလဲပိုလှတယ် airpods လေးနဲ့လဲအံကိုက်ပဲ
Leather သားနဲ့မို့ Air Tag လဲမထိခိုက် မပွန်းဘူး Keyring ကလဲချိတ််ရပြုရအဆင်ပြေတယ်
ဒီ SwitchEasy MagMount Magnetic လေးက သုံးရတာတော်တော် အဆင်ပြေပါတယ်။ Video ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ် ပုံဆွဲတာဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေတယ် Magnetic နဲ့ဆိုပေမယ့် iPad ပြုတ်ကျတာတွေဘာတွေမရှိတာတော့ တော်တော် မိုက်ပါတယ်။
SwitchEasy MagMount Magnetic iPad Stand For iPad Pro 12.9″ 2021
ဒီ iPad stand လေးကတော့ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ် Video တွေကြည့်တယ် Drawing လုပ်တဲ့ အခါမှာ ပို သဘောကျတယ် Magnetic iPad Standလေးဆိုတော့ ပြုတ်ကျမှာလည်း မပူရတော့ဘူး
Good Accessories .
SwitchEasy MagMount Magnetic iPad Stand လေးက ကျွန်တော့်လို Creative Software တွေသုံးမယ်။ ပုံတွေဆွဲမယ် , Web Browsing , ရုပ်ရှင်ကြည့်မည့်လူတွေအတွက် Stand လေးက Magnetic လဲဖြစ်တာကြောင့် iPad ပြုတ်ကျမှာကိုလဲစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် အသုံးပြုရတာလဲအဆင်ပြေဆုံး Item လေးတစ်ခုပါ ဝယ်ယူပြီးအသုံးပြုဖို့အတွက် Highly recommend ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ 🥰🥰🥰
တစ်ချို့ Watch Case တွေမှာ တစ်ခုပဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့် iSure မှာ Ringke watch case လေးက ၁ခုဝယ်ရင် Watch case ၂ခုပါဝင်တာကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ Clear & Metallic Blue watch case 2ခုကို ၁ရက် ၁ ခါအမြဲလှဲပြီးတပ်ဆင်ပြီးအသုံးပြုရတာအကြိုက်ဆုံးပါ Quality နှင့် Price Fair ဖြစ်တာကြောင့်အသုံးပြုရတာအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ။
Ringke Slim Case For Watch Series 7
သယ်သွားသယ်လာပြုလုပ်ရာတွင် Portable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်လိုအမြဲ Powerbank , Cable , Airpod အမြဲသယ်သွားဖြစ်တယ်ဆိုရင် Ringke Portable Pouch လေးကအသုံးပြုရတာအဆင်ပြေဆုံးပါပဲခင်ဗျာ.
Ringke Multi-function Travel Portable Pouch (Small)
Design & Quality ကတော့ပြောစရမလိုပဲ တစ်ချို့ Airpod case တွေလို အတပ်,အချွတ်ပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲမနေပဲ smooth ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ။ 🥰🥰🥰🥰
Ringke Onyx Case For AirPods 3
ကျွန်တော် Airpod အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်ချို့ Airpod case တွေက coverပြုတ်ကျပြီးပျောက်သွားတာမျိုးတွေရှိလို့အဆင်မပြေစိတ်ညစ်ရတာမျိုးရှိပါတယ် iSureမှာ Ringke Mini Pouch လေးတွေ့လိုက်တော့ Orderမှာကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့် Airpod case ပျောက်မှာစိုးရိမ်တဲ့ customer တိုင်းဝယ်ယူပြီးအသုံးပြုကြည့်ဖို့ Highly Recommend ပေးပါတယ်။ 😍😍😍😍
Ringke Mini Pouch – 11 x 7.5 x 2.5 cm ( Two Way Bag Miniature)
Stand လေးနဲ့မို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ ပုံဆွဲတာတို့ဆို အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ် Design လေးက မိမိုက်နေရော
Pencil ထည့်လို့ရတာမို့ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်
Ringke Smart Case For iPad Pro 11″ (2018-2021)
ပေါ့ပါးတယ် Clear Caseလေးဖြစ်တာမို့ original phone colour လေးနဲ့ မိုက်နေရော
Ringke Fusion + Clear Case For iPhone 13 Pro Max
ပေါ့ပါးတယ် ကျစ်လစ်တယ် ကိုင်ရတာအဆင်ပြေတယ် အရမ်းမိုက်
Ringke Fusion+ Clear Case for iPad 9th Gen (10.2″/7/8)
ပေါ့ပါးတယ် ကျစ်လစ်တယ် ကိုင်ရတာအဆင်ပြေတယ်
Ringke brand Accessories လေးတွေ တစ်ချို့ Page တွေမှာ စုံလင်စွာမရှိတာကြောင့် iSure မှာလိုချင်တဲ့ Ringke brand accessories စုံလင်စွာရှိတာလေးကိုသဘောကျပါတယ်ခင်ဗျ။ Mini Cross bag လေးလဲ Leather သားနဲ့မို့ အသုံးပြုရတာလဲအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရမ်းကြိုက်ပါတယ် 🥰🥰🥰
Ringke Mini Cross Bag (PU Leather)
Design လေးက မိုက်တယ် ပုံမှန်ဆို ခါးမှာချိတ်ပြီးမသုံးရဲဘူး ပြုတ်ကျရင် ကိုယ့် AirPods လေးထိမှာစိုးလို့ ဒီဟာက အကြမ်းလည်းခံတော့ အခုတော့ချိတ်သုံးကြည့်တယ် Quality လေးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်။ သဘောကျပါတယ်။
Case လေးတွေတော်တော် သဘောကျတယ် အရောင်လေးတွေကိုရော ပဲ တခြားအရောင်လေးတွေလည်းဝယ်သုံးဦးမယ် အခုကတော့ Clear + White လေးကို တော်တော် ကြိုက်နေပါပြီ ကျေးဇူးပါ။
သုံးရအဆင်ပြေတယ် တန်လည်းတန်တယ် Quality လည်းကောင်းတယ် AirPods လည်းထည့်လို့ရတော့ ပိုအဆင်ပြေတယ် Thank You ပါ
ပါးလွှာပီးမှန်ကပ်ထားလို့ထားမှန်းတောင်မသိသာဘူး Case တပ်ရင်လဲ fit ဖြစ်နေလို့ပိုကြိုက်တယ်
၃ခုပါတော့ အရမ်းအဆင်ပြေတယ် 👍👍👍
Ringke Easy Flex for Watch Screen Protector For Watch Series 7
Lavender gray အရောင်လေးက ကိုယ့်အကြ်ုက်ဆုံးဒေအရောင်လေးလဲဖြစ်တယ် ကိုင်ရတာလဲ အရမ်းsoft ဖြစ်တော့ အမြဲတန်းတပ်ဖြစ်တဲ့cover လေးတစ်ခုပါ
Ringke Air S Case For 13 Series
ကို့ဖုန်းအရောင်နဲ့ကိုက်တဲ့ ပန်းရောင်ကာဗာလေးကြောင့် သိပ်ကြိုက်
Lavender Gay လေးက ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးအရောင်လေး ဖြစ်တယ်ကိုင်ရတာ လဲအရမ်းsoft ဖြစ်ပီး Wireless charging ပါသွင်းလို့ရတာ အမြဲတပ်ဖြစ်တဲ့cover လေးတစ်ခုပါ
13 pro max ကိုင်ပြီး သူ့ weight မနိုင်လို့ လွတ်လွတ်ကျတယ် cover တွေ တော်တော်များများကလည်း clear case ပဲ သုံးချင်တာ ဒီ grip လေးကတော့ သုံးရတာ သူများတွေနဲ့ မတူတာက ညှပ်ထားတဲ့ လက်ကို side effect လာမဖြစ်ဘူး မညောင်းဘူး ဗျာ ကြိုက်လို့ Comoနဲ့ Gimbap နှစ်ခုတောင် ဝယ်ထားတယ် 🤭
Magic keyboard ဝယ်ထားပြီးရင် cover တပ်သုံးရမလဲ ခေါင်းစားနေခဲ့ရတာ Frame Shield နဲ့မှအဆင်ပြေတော့တယ်
Ringke Frame Shield for iPad Pro 11” 2021
Original Color လေးပေါ်ချင်တာ ကျနော်တို့လို Apple User တွေရဲ့ Psycho , Watch case တော်တော်များများက metal color တွေနဲ့ လာတာများတယ် အရောင်လည်းမမှန်ဘူး ဒီကောင်လေးကတော့ Clear Case လေးရော Original Color Case ရော နှစ်မျိုးပါတာ ဆိုတော့ ပျော်ဘီလေ ။
Stay home များလာတော့ အလုပ်ကို အိမ်မှာ ပဲ လုပ်ဖြစ်တာ များတယ် Zoom နဲ့ လုပ်ရတဲ့ Meeting တွေမှာ MacBook မရှိလို့ iPad နဲ့ phone ပဲ ရှိတဲ့ ကိုယ်တို့ လို လူတွေအတွက် ဒီကောင်လေးက တကယ် အထာကျတယ် အသုံးတည့်တယ် Grip ပါ ပါတော့ ငြိမ်လို့ 😍
တိုလီမိုလီတွေ ကို tote bag ထဲ ထိုးထိုး ထည့်နေရတော့ cable တွေက ဟိုငြိ ဒီငြိ ဒီကောင်လေးစမ်းသုံးကြည့်တော့မှ စနစ်တကျ နဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ဖြစ်သွားတာ စိတ်ချမ်းသာတယ်ဗျာ တကယ် အသုံးဝင်လို့ ခိုက်မိတယ် ။
Cleaning cloth လေးနဲ့ phone ရော computer display ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာ က ပိုပြောင်တယ်လို့ခံစားရတယ်
လျှော်ပီးရင်လဲ ဖွာမသွားလို့ကြိုက်တယ် 😍
Ringke Cleaning Cloth (Big 1 Pack)
minimalism သမားအတွက်ဒါလေးက လုံးဝသုံးလို့ကောင်းပြီး အကြမ်းခံတယ် premium ကွာလတီကို ခံစားရတယ်
Ringke Fusion+ Case and Outstanding Combo for iPad Pro 12.9” 2021
I က air pod ကို case တပ်ကိုင်လေ့ရှိတဲ့ သူမဟုတ်ဘူး
ဒါမဲ့ ဟိုတလောက design လေးအထာကျလို့ဝယ်လိုက်တာ Airpodက ကိုင်ရတာ ပါးစပ်ကပြောရတာထပ်ပိုမိုက်တယ်
Fitting ဖြစ်ရုံမက မိမိ iPhone camera ကိုပါကောင်းကောင်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်
Ringke Camera Styling for iPhone 13 Pro/ 13 Pro Max (Black)
Mei ဆ်ု ခုနောက်ပိုင်း အဲ့mini bagလေးနဲ့ပဲ ဘောဒါတွေနဲ့ chillတိုင်း ဝတ်တယ်styleကျလို့🤩သေးသေးလေးဆိုပေးမဲ့ phရော petty cashလေးပါထည့်လို့ရတယ်
Speeder bicycle သမား I အတွက်တော့ weightပေါ့ပြီး တပ်တာ မြဲတော့ သူစျေးတန်းလေးနဲ့ မိုက်တယ်
Ringke Spider Grip Mount
Lin Htun Aung
MacBook ကို ဒီ cleaning kit လေးသုံးပြီးတော့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာလွယ်ကူသလို Soft ဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုရာမှာ မိမိ MacBook ကို ထိခိုက်မှုမရှိတာတွေ့ရပါတယ် ကို့လို့ ပစ္စည်းကောင်းလေးတွေသုံးခြင်တဲ့သူအတွက်တော့ ကွက်တိပါဘဲ အားလုံး အတွက် မရှိမဖြစ်ရှိသင့်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါ။
တော်တော် သဘောကျမိတဲ့ အချက် ကပ်ထားမှန်း လုံးဝ မသိသာ ၊ တချို့မှန်ကပ်တွေ ကပ်ဖူးတယ် Touch Sensitivity လွတ်လွတ် သွားတာ ဒီကောင် လုံးဝ မလွတ် 😘
Phone Screen မှာတင် မဟုတ်ဘဲ တခြား Screen တော်တော်များမှာပါ သုံးလို့ အဆင်ပြေတဲ့ ဟာလေးပါ ။ မျက်မှန်တောင် ဒါလေးနဲ့ပဲ သုတ်တယ် ဗျာ။
စိန်မှုန် ပါတဲ့ ကာဗာလေး သိပ်သဘောကျ ၊ တော်တော်များများမှာ ရှာရခက်တယ် ။ ဖြုတ်ရတပ်ရတာလဲ သက်သာလို ကြိုက်တယ် ပြီးတော့ သုံးလလောက်ရှိပြီ မဝါသေးဘူး တချို့ ကာဘာတွေဆို ခုထိ မခံဘူး ဝါကုန်ပြီ အဲ့တာလေးတော့ တော်တော် သဘောကျမိပြီး ကြိုက်တယ် ဗျာ။
Rinkge Air Case For 13 Series
နူးနူး ညံ့ညံ့နဲ့ အရမ်းထူတာကြီး သိပ်မကြိုက်တဲ့ ကိုယ့်အတွက် ဒီကာလေးက အကြိုက်ပဲ MagSafe Support ဖြစ်နေတာလေးကို တော်တော် သဘောကျတယ်။ တော်တော်များများက မရဘူး ။
Apple Smart Keyboard နဲ့ သုံးနေရင်း ဘေးဘောင်းလေးတွေ လွတ်နေတာ သတိထားမိတယ် မတော်တဆ ပြုတ်ကျရင် ခိုက်မိမှာ စိုးတာ ၊ ခု ဒါလေးတွေနဲ့ တပ်ပြီး သုံးကြည့်တာတော်တော် အဆင်ပြေပါတယ် စိတ်မပူရတော့ဘူး ။
ဒီ အိတ်လေးကို ဝယ်လိုက်တော့မှပဲ Airpod လေးတွေကျပျောက်မှ မစိုးရိမ်ရတော့ဘူး ပိုက်ဆံအိတ်တောင် ယူသွားစရာမလိုတော့အေးဆေးပဲ Qualtity လေးက တော်တော်ကောင်းတယ် တန်တယ်လို့ခံစားရတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်